ज्योतिष शास्त्रः बारअनुसार के गर्दा सफलता मिल्छ ? – Khabar Silo
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना सानासाना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक […]
हाम्रो समाजमा शास्त्रीय मान्यतालाई अहिलेसम्म सत्य मानिन्छ । शास्त्रमा मानवीय जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरेको पाइन्छ ।समुद्रशास्त्रमा शारीरिक अंगको बनावट तथा रुप रेखा हेरेर कुनै पनि ब्यक्तिको भाग्य, गुण र जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरिएको छ। जसकै आधारमा कुनै व्यक्तिको भविश्यबारे पनि बताइन्छ । शिव पुराणमा कुमार कार्तिकेयले मानिसमा यस्ता गुण बताएका छन् जुन गुण […]
काठमाडौँ । टमाटर भान्सामा अनिवार्य जस्तै हुन्छ। हरेक तरकारीमा स्वाद थप्नको लागि टमाटर राख्ने गरिन्छ भने यसको चट्नी तथा अचार पनि स्वादिष्ट हुन्छ। टमाटरको सलाद स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। टमाटर छालाको लागि सौन्दर्यको लागि पनि उत्तिकै राम्रो मानिन्छ। अनुहारमा टमाटर फेसियल गर्नाले अनुहारमा चमक तथा गोरोपन आउँछ। महिनाको दुई पटक टमाटरको फेसियल गर्नु अनुहारको […]